တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လူ ၅၂ ဦးကို ခေါ်ဆောင်လာသူနှစ်ဦးအား ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဆ?? - Yangon Media Group
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံမြို့ နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ၅၂ ဦးကို တရုတ်နိုင်ငံရှိ စက်ရုံတစ်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ဟုဆိုကာ ခေါ်ဆောင်လာသူနှစ်ဦးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်ညပိုင်းက အုန်းချောကျေးရွာရှိ ၁၆ မိုင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ဖမ်းဆီးကာ အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ မှုခင်းအကူဌာန စုမှ ရဲအုပ်အောင်ဆွေလင်းဦးစီး သော အဖွဲ့ဝင်များ၊ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့နှင့် ပူး ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်များသည် မြင်းခြံ မြို့နယ်မှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ၅ဝ ကျော်အား စင်းလုံးငှားယာဉ်လိုင်းဖြင့် မြင်းခြံမှ မူဆယ်သို့ခေါ်လာကြောင်းသတင်းအရ အုန်းချော ကျေးရွာရှိ ၁၆ မိုင်စစ်ဆေးရေး ဂိတ်တွင်စောင့်ဆိုင်းစစ်ဆေးရာ မှန်လုံယာဉ်နှင့်အတူ အမျိုးသား ၄၄ ဦးနှင့် အမျိုးသမီးရှစ်ဦးတို့ကို တွေ့ရှိ၍ ၎င်းတို့အားစစ်ဆေးခဲ့ရာ တရုတ်နိုင်ငံ ဟွေ့ကျုံးပြည်နယ်၊ တုံကွမ်မြို့ရှိ ပရိဘောဂစက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြင်းခြံ မြို့နယ်ကူရွာနေ ကျော်စိုးလင်း(၃၁) နှစ်နှင့် မကျီးသမျှားကျေးရွာနေ အောင်လင်း(၃၈)နှစ်တို့က အဆိုပါ စက်ရုံတွင် တစ်လလျှင်လုပ်အားခ ကျပ်ငါးသိန်းရရှိကြောင်း ပြော ကြားကာ ကျော်စိုးလင်းက ၂၆ ဦး အား တစ်ဦးလျှင် ခရီးစရိတ် ကျပ် ၅၂ဝဝဝဝ နှင့် အောင်လင်းက ၂၆ ဦးထံမှတစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၅၅ဝဝဝဝ ရယူကာ ခေါ်ဆောင်လာကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
”ခေါ်လာတဲ့သူကလည်း တရုတ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်။ အဲဒီမှာဆိုရင် လစာလည်း ကောင်းမယ်။ လိုက်ချင်ရင်လိုက်ခဲ့ကြဆိုပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရွာက လူတွေကိုခေါ်လာတာ။ ဒီအမှုကကျတော့ လူကုန်ကူးမှုနဲ့စွဲလို့မရဘူး။ အဲဒါကြောင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဥပဒေနဲ့ အရေးယူရတာပါ။ အလုပ်လုပ်ဖို့ခေါ်ခံရတဲ့ ၅၂ ဦးကို အုန်းချောရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကူအညီနဲ့ အုန်းချောရွာဓမ္မာ ရုံမှာစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ ပြည်ပသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရင် တွေ့ကြုံ နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကို ပညာပေးခဲ့ပါတယ်”ဟု တိုင်းဒေသကြီးရဲ တပ်ဖွဲ့မှုခင်းအကူဌာနစုမှ ရဲအုပ် အောင်ဆွေလင်းက ပြောသည်။ တရားဝင်လိုင်စင်မရှိဘဲ အလုပ်သမားစုဆောင်းခေါ်ဆောင်လာသူ ကျော်စိုးလင်းနှင့် အောင် လင်းတို့အား ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အုန်းချောနယ်မြေရဲစခန်းတွင် (ပ)၂၇/၂ဝ၁၈၊ ပြည်ပအလုပ် အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ-၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းသိရသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ဒုတိယမြောက် ဆင်စခန်းတစ်ခုကို ရဲရွာသွား ကားလမ်းဘေး ၅ မိုင်တွင် မတ်လကုန်၌ ထပ?
စတုတ္ထတန်းနှင့် အဋ္ဌမတန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုနေသည့် ကာလအတွင်း လားရှိုးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ??
လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ရ တရုတ်နိုင်ငံသား တစ်ဦးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသား နှစ်ဦးတို့အား ပြည်
Arcadia Group က ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်း
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း လမ်းတံတား လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ငွေကျပ်သန်း ၁၂၆ဝဝ ကျော် သုံးစွဲမည် ?